အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ စာပေပါရဂူ (ဒီလစ်ဘွဲ့)
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ချီးမြင့်သည့် ပထမဆုံးသော စာပေပါရဂူဘွဲ့ဖြစ်၏ ။ ထိုအချိန်တွင် ဆရာတော်မှာ မျက်စိကွယ်နေပြီးဖြစ်သောကြောင့် ၁၉၂၁တွင် ဘွဲ့နှင်းသဘင်သို့ တက်ရောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
(၁) တပည့်ရဟန်းတို့အား စာပေပို့ချခြင်း၊
(၃) ကမ္မဌာန်းတရား အားထုတ်ခြင်း၊
လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် စာပေပို့ချခြင်း၊ ကျမ်းဂန်ရေးသားခြင်း၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်ခြင်း၊ တရားဟောခြင်း စသော သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကို သက်တော်ကြီးရင့်လာ၍ အသက် ၇၃ နှစ်ခန့်တွင် မျက်စိကွယ်သည်အထိ မနေမနား ပြုလုပ်တော်မူခဲ့သည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်]
၁၂၈၅ ခုနှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၁၅ ရက် (လပြည့်) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (၂၇-၆-၁၉၂၃) ၂နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန် သက်တော်(၇၆)နှစ်၊ ဝါတော်(၅၇)နှစ်၊ ပျဉ်းမနားမြို့၊ လယ်တီစံကျောင်း၌ ပျံလွန်တော်မူသည်။ 
↑ ၂.၀၀ ၂.၀၁ ၂.၀၂ ၂.၀၃ ၂.၀၄ ၂.၀၅ ၂.၀၆ ၂.၀၇ ၂.၀၈ ၂.၀၉ ၂.၁၀ ၂.၁၁ ၂.၁၂ ၂.၁၃ ၂.၁၄ ၂.၁၅ ၂.၁၆ ၂.၁၇ ၂.၁၈ ၂.၁၉ ၂.၂၀ ၂.၂၁ ၂.၂၂ ၂.၂၃ ၂.၂၄ ၂.၂၅ ၂.၂၆ ၂.၂၇ ၂.၂၈ ၂.၂၉ ၂.၃၀ ၂.၃၁ ၂.၃၂ ၂.၃၃ ၂.၃၄ ၂.၃၅ ၂.၃၆ ၂.၃၇ ၂.၃၈ ၂.၃၉ ၂.၄၀ ၂.၄၁ ၂.၄၂ ၂.၄၃ ၂.၄၄ ၂.၄၅ မုံရွာမြို့၊ မဟာလယ်တီတိုက် ကျမ်းပြုအကျော် ကမ္ဘာကျော် လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး ရေးသားပြုစုတော်မူသော လယ်တီနိဗ္ဗာန်တရားတော်များ၊ နိဗ္ဗာနဒီပနီကျမ်း, နိဗ္ဗာန ဝဿဇ္ဇနာကျမ်း, လယ်တီနိဗ္ဗာန်ကျမ်း (၂၀၁၆ ခုနှစ် (ပထမအကြိမ်)). လယ်တီနိဗ္ဗာန်တရားတော်များ. တိုက်အမှတ် (၄)၊ အခန်းအမှတ် (၄၁၂)၊ ကျီတော်အိမ်ရာ၊ နိုင်ငံတရာကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာနနှင့် ကမ္ဘောဇဘဏ်အနီး၊ အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်းမကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့။: မိခင်ဧရာဝတီစာအုပ်တိုက်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လယ်တီဆရာတော်&oldid=543253" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။